AMBOSITRA : Misedra olana ireo mpivarotra asa tanana ao amin’ny faritra Amoron’i Mania
Mampalaza an’Ambositra, Distrika iray ato anatin’ny Faritra Amoron’i Mania ny fisian’ireo mpivarotra asa tanana maro eto an-toerana. 14 juillet 2017
Na tsy misy toerana maro mahasarika mpizaha tany aza izy dia efa mitondra laza ho azy ireo mpivarotra asa tanana ireo. Araka izany amin’ny fotoana maha betsaka ireo vahiny avy any ivelany mandalo eto an-toerana no tena mampandeha ny tsena. Eo anatrehan’izany anefa, misedra olana izy ireo satria lafo ny asa tanana eto an-toerana raha mitaha amin’ny any an-drenivohitra.
Antony maro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana nataonay tao amin’ny tranom-barotra maromaro. Voalohany, matetika ny mpivarotra any Antananarivo no manafatra vokatra avy amin’ny faritra manodidina. Fa ireo mpivarotra eto Ambositra kosa dia tsy vitsy no manafatra avy any ivelany, indrindra avy any an-drenivohitra. Antony iray mahalafo ny asa tanana eto an-toerana io antony io. Eo ihany koa ny akora fototra izay hafarana avy amin’ny faritra maro.
Misy ny alaina avy any Morondava sy avy any amin’ireo Distrika telo manodidina an’Ambositra dia Fandriana, Manandriana ary Ambatofinandrahana. Am-bolana maromaro mihitsy izany vao tonga rehefa fotoanan’ny orana izay maharatsy ny lalana. Eo anatrehan’izany àry dia nilaza ireo mivelona amin’ity seha-pivelomana iray ity fa tsy mahavelona azy ireo loatra ny fivarotana asa tanana fa tsy maintsy misy ny vadin’asa toy ny fambolena sy ny fiompiana satria misy fotoana tena vitsy ny mpitsidika ary ny fanamboarana ny vokatra koa mitaky fotoana maro izay mahatratra hatrany amin’ny 5 hatramin’ny 15 andro. Anisany antony mahalafo ireo vokatra ihany koa izany fotoana be dia be izany.
Tovolahy mpangarom-paosy tokony ho 28 taona saika matin’ny fitsaram-bahoaka AMBODIMITA (3560) 18 février 2021 Ho fantatra tsy ho ela ny anaran’ireo olona ambony voarohirohy FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA (340) 18 février 2021 Nitafy fahafaham-baraka tanteraka ireo Mpanohitra HETSIKA FANAKORONTANANA (209) 22 février 2021 Miantso ny vahoaka tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana ny FMIEM HETSIKY NY MPANOHITRA (109) 18 février 2021 Nokaramaina ireo olona nanakan-dalana tamin’ny vato JENERALY RAVALOMANANA RICHARD (99) 22 février 2021 Mpanafika taksimoto iray maty voatifitra, valo azo sambo-belona ANDILAMENA (80) 18 février 2021